विराटनगरको चितवनसामू १४६ रनको लक्ष्यलक्ष्य » खबरहरुको एउटै केन्द्र
शनिबार, कार्तिक १७, २०७५ २२:२९ मा प्रकाशित !
काठमाडौं । विराटनगर टाइटन्सले नमस्ते पोखरा प्रमियर लिग क्रिकेटमा राउन्ड रोबिन लिगको अन्तिम खेलमा चितवन राइनोजलाई १४६ रनको लक्ष्य दिएको छ ।
टस जितेर व्याटिङ रोजेको विराटनगरले निर्धारित २० ओभरमा ५ विकेट गुमाई १४५ रन बनायो । मोहम्मद जयाद र सुनील धमलाले पहिलो विकेटमा ८७ रनको साझेदारी गरेपछी विराटनगरले चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाएको हो । पाकिस्तानी खेलाडी जायदले लगातार तेस्रो अर्धशतक बनाउने क्रममा ५१ रन बनाए ।
उनले ४७ बल खेली ६ चौका र २ छक्का प्रहार गरे । सुनीलले ४७ रन बनाउने क्रममा ४५ बल खेली ४ चौका हाने । प्रदीप ऐरी ११, एन्ड्र्यु सुविक्सन ४ र राजु रिजाल ६ रनमा आउट भए । राजेश पुलामी मगर ३ बलमा ८ र पुष्प थापा ४ बलमा ११ रनमा अविजित रहे ।
चितवन राइनोजको तर्फबाट स्मित पटेल र कप्तान पारस खड्काले २–२ तथा करण केसीले १ विकेट लिए । चितवनले यस खेल जितेमा फाइनल पुग्ने सम्भावना रहन्छ । तर हारेमा टोली प्रतियोगिताबाटै बाहिरने छ । चितवनले यसअघिका ४ खेलमा २ मा विजय हात पारेको छ ।
PREVIOUS POST Previous post: शुभकामना चियाँपान
NEXT POST Next post: कालीञ्चोकमा केबुलकार चल्यो
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते शनिबार, कार्तिक १७, २०७५ २२:२९
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस शनिबार, कार्तिक १७, २०७५ २२:२९
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण शनिबार, कार्तिक १७, २०७५ २२:२९
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी शनिबार, कार्तिक १७, २०७५ २२:२९
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? शनिबार, कार्तिक १७, २०७५ २२:२९